Hojiilee waldichi xiyyeeffannaan irratti hojjetaa jiru keessaa tokko babal'isa manneen barnootaati
Hojiilee waldichi xiyyeeffannaan irratti hojjetaa jiru keessaa tokko babal'isa manneen barnootaati Featured
WMO: Waldaa rakkoolee hawaasummaa furuu irratti xiyyeeffate
Waldaan Misooma Oromiyaa (WMOn) waldaa immataa ummataan, ummataaf ijaaramee rakkoo hawaas-dinagdee naannichaa bakka harki mootummaa hinqaqqabne gahuun furuuf waldaalee hojjechaa jiran keessaa isa tokko.
WMOn mul'ata Oromiyaa magariisa, misoomteefi badhaate arguu jedhuufi ergama sagantaa misoomaa hirmaannaa ummataarratti hundaa'ee qindoominaafi ittifufiinsa qabu dhugoomsuu rratti bobba'ee hojjetaa jira.
Daarektarri ittaanaan WMO, Obbo Asfaawu Laggasaa sirna eebba pirojektota adda addaa Sanbata darbe Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee Jiddaafi Waacaaleetti geggeeffamerratti haasawa taasisaniin akka jedhinitti, waldichi keessumaa bishaan qulqulluu waliin ga'uu, misooma qabeenya uumamaafi eegumsa naannawaa, pirojektota fayyaafi barnoota idileefi alidileerratti hundaa'uun jiruufi jireenya ummata naannichaa fooyyessuuf ijibbaata walirraa hincinne gochaa jira.
Waldchi bara 1985 erga hundaa'ee as ummata naannichaa misoomaaf kakaasuun tooftaalee adda addaatiin galii walitti qabee hojiilee rakkoo hawaasummaafi dinagdee ummatichaa furuu danda'an hojjeteera. Waldichi yeroo ammaa miseensota miliyoona 6.6 ol horachuun waggaatti galiisaa qarshii miliyoona 100 olitti guddifateera jedhu Obbo Asfaawu.
Kana maddiitti gargaarsa dhaabbiilee arjoomtotaa adda addaa irraa argatu dabalatee hanga ammaatti pirojektota bu'uuraalee misoomaa kuma sadiifi 354 ol qarshii biliyoona 3.6n hojjechuun tajaajila ummataatiif oolcheera. Kanaanis ummanni miliyoona 26 ol kallattiin akka tajaajlamu ta'eera jedhu.
WMOn imaammata fayyaa dhebii dursanii ittisarratti xiyyeeffate mirkaneessuun du'aatii haadholiifi daa'immanii hir'isuuf gumaacha taasisaa jira. Kanaanis godinaalee 17fi aanaalee 171 naannichaa keessatti ijaarsa pirojektota hawaasummaa geggeessuurratti argama jedhan.
Waldichi buusii miseensotasaarraa argatu keessaa dhibbantaa 80 hojii pirojektota misoomaatiif akka oolcha kan jedhan Obbo Asfaawu, waldichi jaarmiyaalee misooma deggaran adda addaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jira. Keessumaa deggarsa olaanaa jaarmiyaaa “Giliimar of Hoop” kan waajjirrisaa muummeen Ameerikaatti argamurraa argatuun hojiilee misoomaa adda addaa geggeessaa jira. Jaarmiyichi bara 1994 hanga 1999tti hojiilee pirojektota adda addaatiif deggarsa bajataa qarshii miliyoona 26 ol taasisuusaas ni dubbatu.
Jaarmiyaan “GOH” jedhamus bara 2003 qofatti pirojektota bishaanii 13, barnootaa lama, keellaa fayyaa tokko waliigalaan pirojektota 16 ijaaruun tajaajila hawaasaatiif oolchuun himameera. Dhaabbatichi hanga bara 2007tti aanaalee adda addaa naannichaatti hojiilee hwasummaa gara garaatiif qarshii miliyoona 21.6 ramaduunsaas himameera.
WMOn bara 2009 marsaa sadiin Godina Shawaa Kaabaatti qarshii miliyoona 35.7n aanaalee Waacaalee, Jiddaafi Abbichuu Nya'aatti pirojektota barnootaa 17, bishaanii 38, fayyaa namaa jaha, kan beeladaa sadii hojjeteera. Baranas marsaa afraffaatiin qarshii biliyoona 26.8n hojii pirojektota hawaasummaa adda addaa geggeessaa jira.
Kutaaleen hawaasaa aanaalee Jiddaafi Waacaaleerraa sirna eebbaa pirojektota bishaan dhugaatii, kutaalee dabalataa manneen barnootaa, keellaa fayyaafi kilinika beeladaarratti argamanis yaada nuuf kennaniin, WMOn rakkoo isaan qaban hubatee maddiisaanii dhaabachuusaatti daran kan gammadan ta'uu eeru.
Walumaagalatti akeekni waldichi waggoota 25 darbanitti kan dheebote dheebuu baasuuf, inni wallaaluma keessa jiru akka baratuuf akkasumas fayyaalessummaan misoomaaf bu'uura ta'e akka babal'atuuf hojjetaa waan jiruuf ammas tattaaffii gochaa jiru akkuma kanaan duraa hawaasa wajjin harka walqabatee duula dheebuu, doofummaafi dhukkubarratti banee cimsee ittifufuu qaba.
Torban kana/This_Week 7731
Guyyaa mara/All_Days 1817151